A320 ENGINE RESTART 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1257
Jide enyemaka. mgbe ị gafere na a320, mechie engines. ma mgbe m gbalịrị ịmalitegharịa engines maka ụgbọ elu ọhụụ, ndị ọrụ ahụ na-anwụrụ anwụrụ ọkụ mgbe niile, wee malite ịmalite. kedu ihe bụ aghụghọ?
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1261
chee na enweghi enyemaka ebe a. ekele
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1262
Don'tnweghi ihe omuma zuru oke maka onye obula inyere gi aka… Kedu add-on ị na-ekwu maka ya? Ihe omuma ma obu payware? Kedu ụgbọ elu ụgbọ elu?
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1263
Na-ekele ERIK iji freeware si rikoooo fsx mbipụta uzuoku.
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1267
Enwere m ụfọdụ ule taa mana enweghị m ike ịmepụta ihe gị, ka anyị chere maka enyemaka ndị ọzọ ndị ha nwere nwere otu nsogbu ahụ.
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1268
You na-eji nke ọ bụla addon mmemme? Dịka ọmụmaatụ, mgbe m nwere FSX Ejiri m ndị njem FS. Ọ ga-edekọ mmezi na ụgbọ elu, wdg. Yabụ ọ bụrụ na ijigide ya na arụzi ọ ga-arụ ọrụ mebie emebi igwe, ọrụ injin na-adịghị mma, wdg.addon dị ka nke ahụ, gbaa mbọ hụ na ị 'rụziri "ụgbọ elu gị na mmemme ahụ.
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 7 ọnwa gara aga #1293
Mpempe akwụkwọ elele ugboro abụọ, APU nwere ike ịpụ
A320 ENGINE RESTART 1 afọ 7 ọnwa gara aga #1294
ekele nwa. Aga m agbalị
Oge ike page: 0.226 sekọnd